Barcelona oo doonaysa inay Liverpool ka dulqaado bartimaameedkeedii ugu weynaa suuqa bishan Janaayo – Gool FM
Haaruun January 22, 2020
(Barcelona) 22 Jan 2020. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gudaha waddanka Spain kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa kula tartami doonta Liverpool saxiixa weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner maalmaha yar ee ka harsan suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Sida lagu sheegay warbixinta 22-sano jirkaan ayaa u dhaliyay 25 gool tartammada oo dhan kooxda ka ciyaarta horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkaan, waxaana lagu xantaa wiilkan inuu aad ugu sii dhawaanayo inuu u wareego naadiga ku ciyaaara garoonka Anfield.
Warsidaha Sport ayaa sheegaysa in Barca ay soo gashay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Jarmalka si ay ugu bedesho Weeraaryahankooda ee Luis Suarez, kaasoo dhaawac kooxda kaga maqan waqti xaadirkan.
Liverpool ayaa la fahansan yahay in ay tahay koox aan si firfircoon u raadinaynin inay ciyaartoy dheeri ah ku soo darto Kooxdeeda bishaan, halka naadiga difaacanaya horyaalka La Liga ee Barcelona ay ku rajo wayn tahay inay heshiis la gaarto kooxda Leipzig labada isbuuc ee soo socota si ay dhawaanba kooxda ugu soo daraan gool dhaliyahan cajiibka ah.
Si kastaba ha noqotee, weerarayahanka ka soo jeeda waddanka Jarmalka ee Timo Werner ayay u badan tahay inuu heli karo ku dhawaad 60 milyan oo gini, waxaana loo malaynayaa inuu sidoo kale diiradda u saaran yahay Naadiga Chelsea.